सिल्पा पोखरेल अचानक हस्पिटलमा « हाम्रो ईकोनोमी
निर्माता छवि ओझालाइ सम्बन्धविच्छेद गर्ने पक्का गरेकी नायिका शिल्पा पोखरेलको यसै बेला जिवनमा मेल खाने नयाँ भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा मोडेल नविन बूढाथोकीले नायिका पोखरेलको आँशु पुछ्दै गरेको मार्मिक दृश्यले सबैलाई रुवाउने किसिमबाट प्रस्तुत गरिएको छ।
सन्तोष जंग थापाको शब्द, आषिक राईको संगीत र अन्जु पन्तको स्वरमा सजिएको गीत ‘थाहा छैन्’ को म्युजिक भिडियोमा मोडेल नविन बुढाथोकी र नायिका शिल्पा पोखरेलको अभिनय रहेको छ। आषिक राईले निर्देशन गरेको भिडियोमा रामकृष्ण चौलागाइको क्यामेरा र विकाश धमलाको सम्पादन रहेको छ।
शिल्पा अघिल्लो रात म संगै थिइन्, मैले शिल्पाको घरबार बिगार्न खोजेको हैन भन्दै आए यि युवक
नेपाली चलचित्र क्षेत्र कहिले के कारणले तात्छ त कहिले के कारणले, हरेक दिन एउटा न एउटा फन्डा त चलिरहन्छ ।
कसैले आफूूलाई चर्चित र दर्शकमाझ चिनाउन त्यस्ता हर्कत गर्छन त कसैले नचाहदा नचाहदै यस्तो हुन पुग्छ ।
यही लिस्टमा थपिएको काण्ड हो। छबि शिल्पा झगडा काण्डजस्ले एकाएक ठूलै रुप लिएको छ अहिले ।
यस बिषयमा सम्बन्धित भएर चर्चित मोडल अभिले यस्तो खुलाशाा गरेका छन ।
अहिले, जसकारण सबैकोसातोपुतलो उडेको छ ।
भन्दा पनि फरक नपर्ला ? अभिले झगडा हुनुभन्दा अगाडिको रात आफू र शिल्पा राती १ बजेसम्म सगै रहेको कुराको जानकारी गराउदै उनको घरबार बिगार्न नचाहेको भन्दै सनसनीपूर्ण अन्तरबार्ता दिएका छन, हेरौ बास्तबिकता के हो त ?
म बाहिर नआएको भए सायद शिल्पाले जीवन त्यागिन् भन्ने समाचार आउँथ्यो यस्तो रहेछ भित्री कुरा
अहिले नेपाली सिने नगरीमा तहल्का पिटेको बिषय हो शिल्पा पोखरेल र छबि ओझाको झगडा । जुन झगडा प्रहरी चौकीदेखि मिडिया जगत र पुरै नेपाल भरि महामारी फैलिए जस्तै फैलिएको छ । भर्खरै शिल्पाले मियिास“ग कुरा गर्दै छबिबारे यस्तो खुलासा गरिन जसले हरकोहीको मनलाई पगाल्छ । उनले भनिन कि छबिले कुटेर उनको कानको जालीमा समस्या छ र यसरी धरधरी रुदै अन्तिम बिकल्पनै डिभोर्स भएको उनले खुलाएकी छिन । अब यहाभन्दा अगाडि सम्बन्ध नजाने भन्दै छबिको बारे कसैले सोच्दै नसोचेको रहस्यहरु पनि मिडियामा छयापछयाप्ती पारेकी छिन, र रुदै आफना मनभित्रका सबै कुरा यसरी ब्यतm पनि गरिन, हेरौ उनको बास्तबिक कुरा के हो
छविराज ओझासँगको विवादपछि नायिका शिल्पा पोखरेल पहिलोपटक मिडियामा खुलेकी छन्। न्यूज फिल्मीसँगको कुराकानीमा उनले पती ओझाले आफूमाथि शारीरिक र मानसिक यातना दिएको खुलासा गरेकी छन् ।
उनले छविले आफूलाई कानमा चट्कन हानेको बताएकी छन् । आफू डाक्टरकोमा गएको र अब केही दिनमा ठिक हुने स्पस्ट पारिन् । ‘केही दिन ठूलो आवाजको नजिक नजान डाक्टरले सुझाव दिनुभएको छ’, शिल्पाले भनिन्, ‘घटनाको ४–५ दिनसम्म गाला सुन्निएको थियो ।’ छविलाई आफूले ३ बर्षदेखि माफी दिएको भनाइ छ ।
आफूलाई छविको फस्ट वाइफ भएको थाहा नभएको बताएकी छन् । अरु समयमा पनि घाँटी थिच्ने र छोड्ने गरेको भएपनि अन्तिमपटक छविले घाँटी लामो समयसम्म थिचेको थिच्यै गरेको शिल्पाले उल्लेख गरेकी छन्। ‘छविले घाँटी थिचेको थिच्यै पार्दा सबै सकिएको झैँ लाग्यो, केही गर्दा पनि नसकेर खुट्टाले पन्छाएर भागेकी हुँ ।’ आफू सहनै नसक्ने अत्याचारमा परिसकेपछि मात्र मिडियामा आएको बताइएकी छन्
करिव १ साता भयो, चर्चित निर्देशक छवि ओझा र चर्चित अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल बिच आएको मनमुटावका कारण फिल्म नगरी, सामाजिक संजाल मज्जाले तातेको छ । उनिहरु फिल्मी रुपमा मात्र जोडिएका जोडी नभएर सङै जीवन बिताउने गरि बिबाह बन्धनमा जोडिएका जोडि हुन । उनिहरुले ३ बर्ष अघि मात्र बिबाह गरेका थिए ।
केही दिन अघि छविले शिल्पा माथी हातपात गरेका कारण यो अबस्था सिर्जना भएको थियो । छबिले कानको जाली फुट्ने गरि हिर्काएको समाचारले पनि निकै चर्चा पायो । तर छवि यो आफुले हिर्काएको तर कानको जालिमा कुनै असर नपरेको बताउँछन् । शिल्पालाई भने डाक्टरले स्पिकर नजिक केही दिन नबस्न सल्लाह दिएको बताउछिन ।
छोटकरिमा छवि-शिल्पाको बिबादको घटनाक्रम,
शिल्पाले छवि बिरुद्द प्रहरी समक्ष उजुरी गरिन । त्यस लगत्तै प्रहरीले यी जोडिलाई सोधपुछको लागि प्रहरी परिसरमा बोलायो । प्रहरीले बोलाएपछी सोही दिन दुबै जना प्रहरी परिसर, टेकु पुगे । त्यहा पुग्दा छबिले मिडियासामु आफ्नो कुराहरु राखे तर शिल्पा मिडियामा बोल्न चाहिनन । केही समयको अन्तराल पछि प्रहरी समक्ष संगै बस्ने र अबदेखी यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने सहमती गरेर दुबै जना निस्किए ।
सहमति गरेर निस्कने बित्तिकै शिल्पालाई मिडियाले उनिमाथी भएको घरेलु हिंसाको बिषयमा बुझ्न चाहे । उनले रुदै “मलाई परेको छ, मैले भोगेको छु ।” भन्दै धेरै बोल्न चाहिनन र गाडीमा चढेर गईन । त्यसपछि छबिले सामान्य घर झगडा भएको, “चार आनाको मुर्गिलाई १२ आनाको मसला” बनाईएको र सहमती भैसकेको बताए ।
यसरी बाहिरिए पछि दुबै जना मिडियामा देखिन थाले । शिल्पाले नेपाल लाईभमा लामो पीडा पोखिन । जुन भिडियो भने थिएन । त्यस लगत्तै उनिहरुको म्यारिज एनिभर्सरी आयो छबीले एक अन्तरबार्तामा यश बिषयमा बोले र शिल्पालाई नछाड्ने, अन्तिम सास सम्म शिल्पा संगै बसेर बिताउने बताए । त्यसपछी न्युज फिल्मिको एक अन्तरबार्तामा शिल्पाले रुदै आफ्नो पीडा पोखिन ।
त्यस अन्तरबार्तामा शिल्पा लगभग अन्तरबार्ता भरिनै रोईन । उनले आफ्नो पीडा पोखिन, सुनाईन । उनका अनुसार धेरै समय देखि उनले यस्तो पीडा भोगेकी थिईन कि उनी भोलिपल्ट सुटिङ जानुछ भने पनि खाना बनाएर फ्रीजमा राखेर जानुपर्थ्यो । यस झगडामा कुनको कानको जाली फुट्ने गरि हानेको आरोप छवि माथी छ । छवि भने यो कुरालाई स्विकार्दैनन तर शिल्पालाई डाक्टरले केही दिन स्पिकर बजेको स्थान नजिक नबस्न सुझाव दिएका छन । अहिले शिल्पा आफ्नो दाईको घरमा छिन । उनिहरु बिच प्रहरी समक्ष सहमती गरेपनी संगै बसेका छैनन । यतिबेला शिल्पाले डिभोर्स पेपर अघि बढाएको बताएकी छिन ।
यस अन्तबार्ता पछि आधा (करिव १२ बजे राती) छबिले शिल्पालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो फेसबुकमा एउटा लामो स्टाटस लेखे । जसमा उनले यस्तो लेखेका थिए :
मैले ५२ बर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमती सङ सम्बन्ध बिच्छेद भईसकेपछि तपाईं सङ चाहिँ जिन्दगि बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगिका सब थोक कम्प्रमाइज गरेर माया गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो तपाईं l छातिमा हात राखेर आज एक्छिनलाई आफैलाई नढाटी सम्झनुस तपाइले लगाएका कति आरोपहरु सत्य छन ?
यदि तपाईं पनि आफुलाइ सच्याएर अझै मेरो श्रीमती, तपाइले बिहे गर्ने बेलामा आस्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने, म पनि मेरा कमि कमजोरीहरु सच्याएर गान्धीबादी भएर बस्न सक्छु । अरुको कुरा नसुन्नुस, आउनुस हाम्रो घरको ढोका सधै तपाईंको लागि खुल्ला छ । हैन र यदि तपाइ साच्चै म सङ बस्न सक्नु हुन्न भने पनि एक पटक म सङै आएर टेबलमा कुरा गर्नुस ।
मेरो ईतिहास पल्टाएर हेर्नुस आज सम्म मैले कुनै पनि श्रीमतिलाई अन्यायमा पारेको छैन । तपाइलाइ पनि पार्दिन । मैले बिगत ३ दिन देखि तपाइलाइ सम्पर्क गरेर भेट्न खोज्दा पनि तपाइलाई अब मेरो वकिलले भेट्छ भन्नू भयो । म फेरि पनि भन्दैछु, सन्सारको कुनै पनि अदालतमा जानू पर्दैन । छबी ओझाको अदालतमा सिधै आउनुस । तपाइले न्याय पाउनु हुन्छ ।
धेरै ब्यक्तिले शिल्पालाई दोशी देखाए । पैसाको लागि बिबाह गरेको, उमेर नमिल्ने संग बिबाह गरेको कारण यस्तो अबस्था आएको जस्ता टिकाटिप्पणी गरेका छन । उनले अन्तरबार्तामा रुदै आफ्नो समस्या नबुझेको, धेरैले नराम्रा नराम्रा कमेन्ट गरेकोमा चित्त दुखाईन । थोरैले भएपनी आफ्नो समस्या बुझेको मा नै उनले चित्त बुझाईन । यस बिषयमा चर्चित अभिनेत्री, गायिकाहरुले बोले । मिडियामा पोखिएको शिल्पाको रोदन र भनाई अनुसार शिल्पा अन्यायमा परेको देखिन्छ तर यसको बास्तबिकता के हो छवि-शिल्पालाई मात्र थाहा छ ।
छबिले रमाईलो छ मा दिएको अन्तरबार्तामा “शिल्पाले बिबाह गर्छु भनेकै कारण जबर्जस्ती रेखालाई डिभोर्स दिएको, शिल्पाले ४० बर्षको करियर बिगर्न लागेको” बताएका छन । उनले शिल्पालाई आफुले बोलेको कुन कुन कुरा सत्य छ मनन गर्न समेत सुझाव दिए । शिल्पाले डिभोर्स पेपर फाईल गरिसकेको बताएकी छिन । तर छवि शिल्पालाई डिभोस नदिने, अन्तिम बिबाह नै शिल्पासङ भएको बताए ।
मिडियामा पोखिएको शिल्पाको रोदन र भनाई अनुसार शिल्पा अन्यायमा परेको देखिन्छ । तर वास्तविक भित्री कुरा के छ छबी-शिल्पालाई नै थाहा छ । जे होस घरेलु हिंसा कसैले नगरौ । सकेसम्म शिल्पा, छबिको सम्बन्ध फेरीपनी राम्रो बनोस ।
अन्टार्कटिकास्थित हवाई बेसका लागि उडान भरेको चिली बायु सेनाको एउटा जहाज बेपत्ता
१३ तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) को समापनको दिन आज काठमाडौँका मुख्य